အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်ဆိုတာမျိုးက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်တာမျိုးမလား? လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ ယောင်ချာချာကျန်ရစ်နေသူအတွက်တောင်မှ အားသာချက်တစ်ခုတော့ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အရင် အခြေအနေတုန်းက တခြားလမ်းတွေမှာ ခရီးပေါက်ပြီးသားသူတွေထက် ဆုံးရှုံးမှုသက်သာစွာ၊ လျင်မြန်ချောမွေ့မှုပိုမိုစွာနဲ့ ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းပါ။
နိုင်ငံတကာရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ လောင်စာဆီနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရဲ့ စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူ မောင်းနှင်နေကြတဲ့ ကားတွေက အများကြီးပါပဲ။ Worldometers ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့လမ်းတွေပေါ်မှာ ခရီးသည်တင်ဆောင်ပြီး နေ့စဉ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ လောင်စာဆီသုံးကားအစီးရေဟာ ၁ ဘီလီယံအထိရှိနေခဲ့တယ်။ ယနေ့ဆိုရင်တော့ အရေအတွက်ဟာ ပိုပြီးများလာဖို့သာ ရှိနေတာပါ။
မော်တော်ကားတွေ များသထက်များလာတာနဲ့အမျှ လောင်စာဆီနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရှားပါးလာမှုကြောင့် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်နွမ်းစေမှု အညွှန်းကိန်းတွေကလည်း တိုးသထက်တိုးလို့လာနေပါတယ်။ ပိုပြီး ပူနွေးလာတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့သက်တမ်းကို ဆက်လက်ဆွဲဆန့်ဖို့အတွက် လူသားတွေရဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်လိုက်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုကတော့ အများသိပြီးကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ EV (Electric Vehicle) လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေ ပိုမိုထွန်းကားလာစေဖို့ပါ။
အခုအချိန်ဟာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ လျှပ်စစ်ကားတော်လှန်ရေးအရှိန်ရစပြုနေတဲ့အချိန်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နောက်ဆုံးထုတ် လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ဘယ်ကားတွေနဲ့မှမတူဘဲ အမြင့်ဆုံးအနေအထားထိအောင် ရောက်ရှိလာနိုင်တာမို့လို့ပါ။ မကြာမီထွက်ရှိလာတော့မယ့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးကားတွေဖြစ်တဲ့ Pininfarina Battista နဲ့ Rimac C_Two တို့ဟာ မြင်းကောင်ရေ 1,800 အထိတောင်မှ ပါဝါထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးက လျှပ်စစ်ကားတွေဖြစ်ကြပြီး ၂ စက္ကန့်အတွင်း ကားစက်နှိုးထားတဲ့အခြေအနေကနေ တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်နှုန်းအရှိန်ကိုရရှိစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးကားဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကို သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ လျှပ်စစ်ကားတွေက သိမ်းပိုက်သွားဖို့ကတော့ သေချာနေပါပြီ။
ကောင်းပြီ။ Hypercar တွေကတော့ ထားပါတော့။ သာမန်လျှပ်စစ်ကားတွေအတွက်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်က အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုလျော့ကျရေး၊ သဘာဝရင်းမြစ်တွေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုလျော့ကျရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အတူ ချီတက်လာကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ အခြားအရာဝတ္ထုတွေလိုပါပဲ၊ လျှပ်စစ်ကားတွေမှာလည်း အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိလို့နေပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ ယေဘုယျ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ?
၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မညစ်နွမ်းစေခြင်း
ဒါဟာ လျှပ်စစ်ကားတွေ ပြန်လည်နိုးထလာရခြင်းရဲ့ အဓိကအရင်းခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆီမှာသာ သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာကြီးက မဆီမဆိုင်သလို၊ ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကပဲ ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ နေထိုင်ခြင်းမရှိသလို လုပ်နေကြပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာက ကြီးရင့်မှု ဝေဒနာတွေအပြည့်နဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့် လူသားတွေရဲ့ လက်စွမ်းပြချက်တွေကြောင့် ပိုလို့တောင်မှ အိုစာနေရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ပြန်လည်ကုသခြင်းမပေးနိုင်ရင်တောင်မှ ထိန်းသိမ်းပြီးကြာရှည်ခံအောင် ချမှတ်ထားတဲ့ စီမံချက်တွေထဲမှာ exhaust စနစ်မပါဝင်တဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Zero emissions ပါ။ ဘာမှစွန့်ထုတ်မှုမရှိဘူး။ ကမ္ဘာကြီးပြန်လည်ကျန်းမာလာဖို့အတွက် သန့်စင်တဲ့လေပမာဏကိုမြင့်တက်စေခြင်း အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်ခြင်းလို့လည်း ဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒါကလည်းရှင်းလင်းသိလွယ်တဲ့အချက်ပါပဲ။ လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် လျှပ်စစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က အဆများစွာ ပိုမိုနည်းပါးပါတယ်။ မှတ်တမ်းများအရဆိုရင် အမေရိကန်တွေဟာ လောင်စာဆီသုံးကားတွေနဲ့ ခရီးတစ်မိုင်ရောက်ဖို့ ပျမ်းမျှ 15 cents လောက်ကုန်ကျပါတယ်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ဆိုရင် တစ်မိုင်ခရီးအတွက် ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်5cents လောက်ပဲကျသင့်မှာမို့လို့ ကုန်ကျစရိတ် သုံးဆလောက် သက်သာတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် လျှပ်စစ်အားသွင်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတာနဲ့ နေအိမ်မှာ solar panels တွေတပ်ဆင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင်မှ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာဦးမှာပါ။
လူရှုပ်ကားကျပ်ချိန် မြို့တွင်းလမ်းတွေမှာ လမ်းတစ်ခေါက်လောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်။ မြင်နေကြားနေရတဲ့သူတွေအတွက် မထူးဆန်းဘူးလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် အာရုံစူးစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကားသံတွေဟာ ဘယ်လောက်ဆူညံသလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီးသတိထားမိမှာ မလွဲဘူး။ လျှပ်စစ်ကားကတော့ အသံဆူညံမှုနည်းပါးပါတယ်။ လောင်စာဆီအသုံးပြု အသေးဆုံးအင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားထက်တောင်မှ နည်းပါးတာပါ။
၄။ ပြုပြင်ရတဲ့အကြိမ်ရေနည်းသွားခြင်းနဲ့ ပြုပြင်ခသက်သာခြင်း
လျှပ်စစ်ကားကတော့ လျှပ်စစ်ကားဖြစ်တာနဲ့အညီ combustion engine တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အတွက် အဲဒီအင်ဂျင်တွေလိုမျိုး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရာမလိုအပ်ပါဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ကားတစ်စီးကို ဝယ်ယူမောင်းနှင်ခြင်းအားဖြင့် ငွေပိုစုမိနိုင်တယ်ဆိုတာက ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ့်အကွက်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကလိုနိုင်ငံမှာတော့ ခင်ဗျားကသာ လျှပ်စစ်ကားရဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါစေ။ အစိုးရထံကနေ tax credit တွေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ zero-emissions ကားကိုမောင်းနှင်ခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုလျော့ပါးစေတဲ့အတွက် သပ်သပ်အပိုဆောင်းပေးတာပါ။ ကိုယ်စီးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ကားအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး tax credit ဟာ $7,500 အထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မနည်းလှတဲ့ပမာဏတစ်ခုပါပဲ။ အတုယူစရာလည်းကောင်းလှပါတယ်။
၁။ EV အများစုရဲ့ range မှာနည်းလွန်းခြင်း
ပါဝါတွေမတရားကောင်းတဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေထွက်လာတော့မှာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်အထိ လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ range တွေကနည်းလွန်းသေးတယ်လို့ ပြောလို့ရနေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ဖြေရှင်းလို့ရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်မှာလည်း Tesla Model S Long Range ရဲ့ 375 mile range၊ Tesla Model3Long Range ရဲ့ 348 mile range၊ Tesla Model X Long Range ရဲ့ 315 mile rage၊ Jaguar i-Pace ရဲ့ 292 mile range၊ Kia e-Niro ရဲ့ 282 mile range စတဲ့ အားတစ်ခါသွင်းပြီး ကြာရှည်မောင်းလို့ရတဲ့ကားတွေ ထွက်ရှိနေပါပြီ။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ဈေးနှုန်းပါ။ Range များများရတဲ့ကားတွေဟာ ထုံးစံအတိုင်း ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ကြီးမြင့်ပါတယ်။ သာမန် လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ Range ကတော့ မိုင် 60 ကနေ မိုင် 100 လောက်အထိပဲရှိနေကြသေးတယ်။
လျှပ်စစ်ကားအများစုရဲ့ ဘက်ထရီ အစမှအဆုံး ပုံမှန်အားသွင်းချိန်က ၄ နာရီဝန်းကျင်ပါ။ ဒါဟာ လောင်စာဆီသုံးကားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကိုကြာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အသုံးပြုတဲ့ charger နဲ့သက်ဆိုင်မှုတော့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ကားစာရင်းမှာပါတဲ့ Tesla Model S (2019) ကိုအားအစကနေအဆုံးအပြည့်သွင်းဖို့အတွက် 3.7KW နဲ့ဆိုရင် 21 နာရီ၊ 7KW နဲ့ဆိုရင် 11 နာရီ၊ 22KW နဲ့ဆိုရင်5နာရီနဲ့ လက်ရှိအမြန်ဆုံး 45-50KW နဲ့ဆိုရင်2နာရီကြာမြင့်မှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လောင်စာဆီသုံးကားတွေနဲ့ယှဉ်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောချင်ရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ Charger တွေရဲ့အမြန်နှုန်းအပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကလည်းများများလာပါသေးတယ်။
လျှပ်စစ်ကားတွေဟာ ရေရှည်မှာ ကုန်ကျစာရိတ်လွန်စွာသက်သာတာမှန်ပေမယ့် ကနဦးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ သာမန်လောင်စာဆီသုံးကားတွေထက်ကြီးမြင့်ပါတယ်။ ဈေးသက်သာတယ်ဆိုတဲ့လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတောင်မှ $30,000 ကနေ $40,000 လောက်အထိရှိတာမျိုးပါ။ ဇိမ်ခံကားအဆင့်ဆိုရင် $80,000 ကျော်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ Charging Station တွေနည်းပါးသေးခြင်း
ကိုယ်က ဈေးနှုန်းမြင့် Range များများရတဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေမဝယ်နိုင်သေးချိန်မှာတော့ ကိုယ့်သွားမယ့် ခရီးအကွာအဝေးအပေါ်မူတည်ပြီး charging station တွေ ရှိ/မရှိဆိုတာအသက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ခရီးဟာ ကိုယ့်ကားစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ Range အတွင်းမှာရှိပြီး တစ်ညလုံးအိမ်မှာပဲအားသွင်းလို့ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ charging station ရှိ/မရှိဆိုတာက လျှပ်စစ်ကားဝယ်ယူမောင်းနှင်မယ့်သူတွေအတွက် ခေါင်းခဲစရာပါပဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ အရင်ကထက်စာရင် ရွေးချယ်စရာလျှပ်စစ်ကားတွေများလာပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သာမန်လောင်စာဆီသုံးကားတွေနဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်စရာက နည်းပါသေးတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တာက တစ်ပိုင်း၊ လူအများစု လွယ်လင့်တကူ ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်တာက တစ်ပိုင်းပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများစု ရွေးချယ်ဝယ်ယူစရာ ခပ်များများရှိလာမှသာ လျှပ်စစ်ကားတော်လှန်ရေးက အောင်မြင်မှာပါ။
တကယ်တော့ ကိုယ်တွေဆိုတာက လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်နေရာမှာ ယောင်ချာချာကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေ။ ဒီလိုကျန်ရစ်ခဲ့သူအတွက် အများသူငါထက် ရှေ့မရောက်ရင်တောင်မှ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်လှတယ်။ ဒီလိုရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် တခြားလမ်းတွေမှာရောက်ပြီးသားသူတွေထက် ပိုမိုနည်းပါးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်၊ ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချိန်ကာလတွေကို ရရှိနိုင်တာမို့လို့ လက်ဦးမှုရယူထားသင့်တယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ လောင်စာဆီသုံးကားမှသည် လျှပ်စစ်ကားအဖြစ်သို့ အပြောင်းအလဲဟာ ဖြစ်မှာသေချာတဲ့အတွက် မက်သင့်မက်ထိုက်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲလို့ ဆိုပါရစေတော့။
Pros and Cons of EV by energy sage
The Biggest Pros and Cons of Electric Vehicle by Earth911
Longest Range Electric Cars 2019 by Car Magazine
How Long Does It Take To Charge an Electric Car by Pod Point